I-Rössle Apartment Top 4 okanye 8 (65 m2)
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMarcell
Kwindlu yethu entsha yamaplanga, yanamhlanje kunye neyakhiwe ngokwengingqi eFaschina, iintlobo ezi-5 ezahlukeneyo zikulindele ngemibono emangalisayo yeentaba zeGreat Walser Valley.
Kumagumbi anobuhlobo ne-allergies anefenitshala ekhululekile, ungaphumla ngokumangalisayo kwaye ucime kubomi bemihla ngemihla.
Ukuba uhlala nathi kwenye yeentlobo ezahlukeneyo zamagumbi, unokubhukisha i-buffet yesidlo sakusasa sengingqi kwigumbi lethu elihle lesidlo sakusasa.
Walser ukwamkela iindwendwe iminyaka engama-250
Isakhiwo esitsha sendlu sakhiwe ngokupheleleyo ngendlela yesithethe sokwakha saseVorarlberg, ikakhulu ngamaplanga asekuhlaleni. Zivumele umangaliswe sesi sakhiwo esitsha, esiya kuphinda sibe likhaya kwivenkile yezemidlalo kunye ne-coffee bar encinci kumgangatho ophantsi.
Sport Rössle ehlotyeni
Ivenkile entsha yezemidlalo endlwini yeRössle Apartments eFaschina ikwabonelela ngobonelelo lwangaphandle oluhambelanayo ngeholide yakho yehlobo kwiinyanga zasehlotyeni. Mhlawumbi ulibele isixhobo ekhaya okanye ungathanda ukutshintsha iimpahla zakho kwiholide yakho yasezintabeni? Akukho ngxaki. UFaschina uFredi ovela kwiMidlalo uRössle uya kukunika iingcebiso ezilungileyo kunye nenkxaso.
Kwi-ambience yanamhlanje yevenkile yezemidlalo, ngaphezu kwempahla kunye nezixhobo ze-alpine, amaphephandaba kunye namaphephancwadi emihla ngemihla anikezelwa kwi-kiosk. Indawo yokuphumla encinci epholileyo yekhefi ijikeleza kwi-Sport Rössle ebonelela eFaschina.
Ehlotyeni, ngekhadi lakho leendwendwe (ukususela kubusuku obu-3) uya kufumana kwakhona "iKhadi leBregenzerwald" elidumileyo elibandakanya ukusetyenziswa simahla kwazo zonke iimoto zekhebula, iibhasi kunye namachibi okuqubha kummandla. Ivenkile yezemidlalo ikwasebenza njengendawo yolwazi yengingqi yeholide yaseDamüls Faschina ganuso kunye neGroßes Walsertal biosphere reserve.
Sijonge phambili kutyelelo lwakho!
UFredi Schäfer kunye neQela lakho
Umbuki zindwendwe ngu- Marcell
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bludenz District